Izvozvi zvave kugona kuyedza Amazon Luna pasina kukokwa | IPhone nhau
Amazon Mwedzi ndiyo Amazon gore vhidhiyo mutambo webasa, sevhisi yakafanana neiya inopihwa neMicrosoft kuburikidza neXCloud neGoogle neStadia. Iyo e-commerce hofori yakazivisa Luna kekutanga mu Svondo 2020, kunyangwe kusvika parizvino, yaingowanikwa kuburikidza nekukoka.
Iyo kambani yazivisa kuti pakati pemazuva 21 ne22, chero mushandisi ane Amazon Prime account anogona edza sevhisi zvachose kwemazuva manomwe, mushure meizvozvo iwe unogona kuramba uchinakidzwa nebasa mukuchinjana ne $ 7 pamwedzi, nekuti parizvino, ichiri kungowanikwa muUnited States chete.
Como kuvhura kukwidziridzwa, Amazon iri kupa 30% dhisikaundi pane iyo Luna Controller, mutungamiriri anotaurirana akananga nemaseva eamazon, ayo anodzivirira kuve nekugadzirisa mamwe ma controller anowiriranawo, seaya eiyo Xbox neiyo PlayStation.
Kusiyana neXCloud, Amazon mwedzi inoenderana nematanho kana mapakeji emutambo senge iyo iripano yapihwa kuburikidza neUbisoft +, saka zvakanyanya sekubatana kwetambo (uko vashandisi vanobhadhara chiteshi chavanoda kuona) pane Netflix.
Iyo $ 5,99 yekunyorera pamwedzi inobvumidza kuwana kune mashoma nhamba yemitambo senge Kudzora, Metro Ekisodho uye Grid. Kuburikidza neUbisoft + uye kubhadhara $ 14,99 pamwedzi, iwe unokwanisa kuwana iyo rese katalog iripo ikozvino kubva kuUbisoft, pamwe nezviri kuuya zvinoburitswa.
Kutanga kweAmazon Luna kuSpain
Parizvino, Amazon haina kutaura nezve zuva rekuburitsa muEurope (zvingangoita kuti zviitwe munyika dzese pamwe chete). Amazon Luna inokutendera kuti unakidzwe neyechizvino mitambo yemitambo pane chero chishandiso, kungave pane iPad kana iPhone (kuburikidza neSafari), Android, pane PC kana Mac uye kunyange kuburikidza Moto TV yekambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Izvozvi zvave kugona kuyedza Amazon Luna pasina kukokwa
Kutumira mapepa anonamira paWhatsApp kuchakurumidza kuitika